ခါရှိုခီသေဆုံးမှုနောက်ပိုင်း တူရကီနိုင်ငံသို့ ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့စံမင်းသား ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်လည်ပတ် - Xinhua News Agency
အန်ကာရာ ၊ ဇွန် ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
၂၀၁၈ ခုနှစ်က သတင်းသမား ခါရှိုခီသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံ အိမ်ရှေ့စံမင်းသား မိုဟာမက်ဘင်ဆော်လ်မန်အယ်လ်ဆော့သည် ပထမဆုံးအကြိမ်အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အဖြစ် တူရကီနိုင်ငံမြို့တော် အန်ကာရာမြို့သို့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တူရကီသို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိလာသော ဆော်ဒီအာရေးဗျ အိမ်ရှေ့စံမင်းသား Mohammed bin Salman Al Saud (ယာ) အား တူရကီနိုင်ငံသမ္မတ အာဒိုဂန်(ဝဲ)က အန်ကာရာမြို့၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆိုစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တူရကီနိုင်ငံသမ္မတရိဒ်ဆက်တေရစ်အာဒိုဂန်က ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့စံမင်းသားကို ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ခမ်းခမ်းနားနားကြိုဆိုခဲ့ပြီး ယင်းနောက်တွင် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့သည် သီးသန့်အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အိမ်ရှေ့စံမင်းသား မိုဟာမက်ဘင်ဆော်လ်မန်သည် ဒေသတွင်းချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အဖြစ် အီဂျစ် နှင့် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် တတိယမြောက်နိုင်ငံအဖြစ် တူရကီနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာတွင် ကော်လံစာသတင်းသမားအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသည့် ခါရှိုခီသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် တူရကီနိုင်ငံ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ရှိ ဆော်ဒီကောင်စစ်ဝန်ရုံးအတွင်း အသတ်ခံခဲ့ရပြီး ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့စံမင်းသားအပေါ် နိုင်ငံတကာက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ထိုးနှက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သလို တူရကီနှင့်ဆော်ဒီအာရေးဗျအကြား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး အနိုမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ ထိုးကျသွားခဲ့ရသည်။
ထို့ပြင် အီဂျစ်၊ လစ်ဗျား နှင့် ဆီးရီးယား စသည့် ဒေသတွင်း အရေးကိစ္စရပ်များတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် မျက်စိကျစရာ မဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေးနက်ရှိုင်းစွာ ကျဆင်းနေသည့် တူရကီနိုင်ငံသည် မကြာသေးမီက ဆော်ဒီအာရေးဗျအပါအဝင် အခြားသော အာရပ်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
ခါရှိုခီသေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆော်ဒီအာရေးဗျအိမ်ရှေ့စံမင်းသားအား သံသယတရားခံအဖြစ်မှ တူရကီနိုင်ငံတရားရုံးတစ်ခုက ပြီးခဲ့သော ဧပြီလတွင် ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပြီး ၊ အမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအချက်အလက်များကို ဆော်ဒီအာဏာပိုင်များထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် တူရကီသမ္မတသည် နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိလာသော ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့စံမင်းသားနှင့်အတူ အစည်းအဝေးတစ်ခု ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။(Xinhua)
ANKARA, June 22 (Xinhua) — Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud on Wednesday arrived in Ankara, Turkey’s capital, to start his first visit to Turkey since the death of the journalist Jamal Khashoggi in 2018.
Photo(1) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) welcomes Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud in Ankara, Turkey, on June 22, 2022. (Photo by Mustafa Kaya/Xinhua)
Photo(2) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L, Front) welcomes Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud (R, Front) in Ankara, Turkey, on June 22, 2022. (Photo by Mustafa Kaya/Xinhua)